'Scorn's' Nightmarish Trailer Yakafanana Kugara muHR Giger Musoro - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Scorn's' Nightmarish Trailer Yakafanana Kugara muHR Giger's Musoro
Horror Varaidzo NhauTrailer (dzakateerana)
'Scorn's' Nightmarish Trailer Yakafanana Kugara muHR Giger's Musoro
yakanyorwa na Trey Hilburn III October 23, 2020
Mumwe wemitambo yakasvetukira kwatiri pa Xbox yekuratidzira kutanga kwegore yaive mutambo kubva kuEbb Software yakatumidzwa Kushorwa. Munhu wekutanga kupfura, airatidzika senge hope dzinotyisa, idzo dzaimira nyore kure nepaketi yemimwe mitambo irikuratidzwa.
Kutanga uye pamberi pezvese mutambo uyu unoita kunge wakabuda chaiko kune anozivikanwa muimbi, pfungwa dzaHR Giger. Inorarama uye inofema munzvimbo imwechete iyo hunyanzvi hwake. Ebb Software hapana mubvunzo vateveri veGiger uye ndiyo nyama uye mbatatisi yemutambo uyu.
Iyi maminetsi gumi nemana mavhidhiyo anotorwa kubva kumutambo chaiwo. Zvinoshamisa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi, izvi ndeizvo zvazvinoita zvine hukama nenyika dzeGiger.
All the Kushorwa vhidhiyo inoratidzwa irikumhanya pane iyo Xbox One Series X.
“Iyo nharaunda yese uye kusangana kwese kuri mairi kwakagadzirirwa kutaura imwe nyaya uye kukukwevera iwe munyika yeSekori. Pakutanga vasina hanya nehuhunhu hwako munzvimbo dzinonamira, dzehupenyu dzavanogara, zvisikwa zvaunosangana nazvo zvinokurumidza kushora kana zvayambuka. ” iyo yakapihwa yekuburitsa inoti.
Kushorwa iri kuuya kuXbox One Series X uye PC muna 2021.
Imi varume munofungei nezve Gameplay yamakaona? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Tarisa uone mamwe eHR Giger Anonyanya Kubata Hits pano.
Ebb SoftwareHR GigerKushorwaXbox Imwe Series X
'Halloween Yakamiswa' Pfupi Zvimiro Michael Myers Zvega
Shudder Inounza Chills Nyowani uye Mafaro, Anokwazisa Mario Bava munaNovember 2020
Bhurawuza Cateories Select Category Amazon (bhaisikopo) (7) Amazon (dzakateerana) (8) AppleTV + (1) Blu mahara (3) Comedy Horror (46) Comics (11) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (30) Yakawanikwa Footage (26) Gore (23) HBO (mafirimu) (4) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (42) Horror Varaidzo Nhau (10,380) Anotyisa Mafirimu (153) Zvinotyisa Series (46) Zvinotyisa Subgenres (8) Hulu (akateedzana) (4) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (31) Nhaurirano (dzakateerana) (2) LGBTQ Inotyisa (29) Lists (mafirimu) (35) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (19) Monster Horror (9) Wongororo dzeMovie (37) Mafirimu (11) Mumhanzi (32) Netflix (bhaisikopo) (12) Netflix (akateedzana) (20) Kwete-Ngano (3) Zvakaenzana (75) Psychological Horror (zvinonakidza) (52) Series Ongororo (5) Kubvunda (bhaisikopo) (38) Kubvunda (dzakateerana) (13) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (35) Kutenderera Mafirimu (45) Kuratidzira Series (15) Zvidhori (2) Ngoro (firimu) (114) Ngoro (dzakateedzana) (31) Mhosva Yechokwadi (41) Vhidhiyo Mitambo (163) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (11)